Sarudza chinhu chimwe kwehupenyu hwose.
Tarisa pakuita kuti zvigadzirwa zvive zvakanyanya kukosha.
Kuda kuita zvigadzirwa zvine mweya.
Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd. inonyanya kuita kutengeswa kwemidziyo yekurapa, yakanangana nekushambadzira kwemidziyo yemukamuri yekuvhiya, kusanganisira marambi ekushandisa, matafura ekushandisa, uye pendi dzekurapa. Mutsara wese wezvigadzirwa zvinotengeswa pasi rese, uye isu tine vamiriri vega vega munyika dzakawanda muEurope neAmerica.
Muna Chikumi 2003, kambani yakaisa mari mukugadzwa kwefekitori inoshanda mukuvandudza nekugadzira michina yekurapa yemakamuri ekuvhiyiwa. Mushure mekugadzwa kwefekitori, nhamba huru yematarenda esainzi uye tekinoroji uye vashandi vakanyatsodzidziswa vakatorwa uye vakaunganidzwa kuti vamise nekuvandudza manejimendi emakambani. Parizvino, zvigadzirwa zvedu zvese zvakapfuura CE uye ISO certification.
Parizvino, kambani yedu yakagadzira akawanda-anoshanda matafura ekushanda, akawanda akateedzana emwenje asina mumvuri, mapendenti ekurapa, mabhiriji ekumisa ICU uye zvimwe zvigadzirwa zvemichina yekurapa. Zvigadzirwa izvi zviri pachinzvimbo chekutungamira muChina uye zvinogona kutengwa kunze kwenyika kuti zvizadzise zvinodiwa zvakasiyana zvezvipatara zvakasiyana. Inotengeswa pasi rose uye inorumbidzwa zvakanyanya nevashandisi.
Isu hatingove neanopfuura gumi R&D mainjiniya ane basa rekuenderera R&D uye hunyanzvi hwezvigadzirwa zvakasiyana, asi zvakare tinochengetedza hukama hwehukama hwenguva refu nemayunivhesiti mazhinji.
Isu mhinduro takapfuura nepasirese hunyanzvi certification uye takagamuchirwa zvakanaka muindasitiri yedu yakakosha. Chikwata chedu cheinjiniya chehunyanzvi chinowanzo gadzirira kukushandira iwe wekubvunza uye mhinduro.